Haiti: Halka ay lacagtiinnu ku baxdey - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Ka dib markii uu dhacay dhul-gariirkii halakeeyey Haiti galabnimadii 12kii Jannaayo 2010ka, ayaa MSF waxaa ka tan badiyey deeqsinimada ay muujiyeen dadka ku nool dunida ee sida deeqsinimada weyn ay ku dheehan tahay u taageerey hawsheenna wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah.
Iyada oo dadaallada gargaarka caafimaadka ee Haiti ay isla markiiba isku dubbadhacayeen oo ay noqonayeen kuwo aad u ballaaran, ayaa wadarta guud ee maaliyadda ay MSF ugu deeqeen dadweynaha gaar ahaan tan ay dadkaasi ugu deeqeen xaaladda degdegga ahi ay noqon gaartey mid aad uga badan wixii ay MSF ku fekeri jirtey in ay kharashgareyso. MSF ma dhayalsaneyso waxa ay ka filayaan deeq-bixiyeyaasheeda waxaana ay go’aansatey in ay joojiso maaliyaddii ay sida firfircoon ugu raadin jirtey dhibbanayaasha maalmihii xigey masiibada dhulgariirka.
Lagu deeqey ilaa 31kii Maajo
La kharash-gareeyey ilaa 31kii Maajo
La qorsheeyey in la kharash-gareeyo ilaa dhammadka 21010ka
Wadarta (oo la duubey) deeqaha la heley iyo lacagta lagu kharashgareeyey waxqabadkii MSF ee Haiti.
Wixii loo soo gaarey dhammaadkii Maajo, ayaa MSF ay heshey lacag wax yar ka badan 91 milyan oo Euro* oo gaar ahaan loogu deeqey gargaarka degdeggga ah ee Haiti waxaana ay kharashgareysey 58 boqolkiiba maaliyaddan – ilaa 53 milyan oo Euro. Hadda waxaa la saadaalinayaa in miisaaniyaddu noqoneyso qiyaastii 89 milyan oo Euro –98 boqolkiiba lacagtii la heley – ayaa ay tahay in la kharashgareeyo ilaa dhammaadka 2010ka. Lacagtan wixii ka soo hara waxaa lagu kharashgareyn doonaa hawlaha aan Haiti ka qaban doonno sanadka 2011ka iyo wixii ka dambeeya.*
Sidee ayaa aan u kharashgareyney lacagta?
Wixii loo soo gaarey 31kii Maajo, ayaa in ka badan 11 milyan oo Euro lagu kharashgareeyey daryeel qalliin: MSF waxa ay daweysey in ka badan 173,000 oo bukaan waxaana ay sameysey 11,000 oo qalliin.
Ugu yaraan 4 milyan ee Euro waxaa lagu bixiyey adeegyada caafimaadka hooyada, kuwaas oo intii aanu dhicin dhulgariirka ka horba ahaa kuwo aad u yar. Shaqaalaha MSF ayaa gacan ka geystey in 3,700 carruur ah laga umuliyo hooyooyinkooda ilaa intii uu dhacay dhul-gariirka.
Ku dhowaad 8.5 milyan oo Euro** waxaa lagu bixiyey hoy iyo waxyaabaha la xiriira iyada oo la isku dayayo in la wanaajiyo xaaladaha nolosha ee boqollaalka kun ee ay guryahooda iyo nolol-raadsigoodii ay burbureen.
MSF waxa ay sidoo kale lacag aan tiro yareyn ku maalgelisey hawlaha kale ee caafimaadka iyo kuwa gargaarka, ee ay ka mid yihiin daryeelka aasaasiga ah, taageerada caafimaadka dhimmirka, bixinta biyo iyo fayadhowr.
Waxyaabaha kala duwan ee kharashaadka lagu bixiyey
In laga shaqeeyo barnaamij caafimaad oo sidaan u ballaaran waxaa uu u baahan yahay waxqabadyo aad u kala duwan. Iyada oo lagu xisaabtamayo burburka soo gaarey magaalada Port-au-Prince iyo bannaankeedaba, oo ay ku jiraan xarumaha caafimaadka iyo cusbitaallada ee ku dhowaad gebi ahaanba burburey, ayaa ku dhowaad 30 boqolkiiba kharashaadka MSF ee ilaa 31kii Maajo baxay waxaa loo qoondeeyey adeegga (logistics) sida dayactirka ama dhisidda tas-hiilaadka caafimaadka, iyo ka shaqeysiinta joogtada ah ee dhismayaasha caafimaadka oo ay ku jirto bixinta biyo iyo koronto. Maalgelintan la’aanteed, shaqaalaha caafimaadka uma ay suurtowdeen in ay shaqeeyaan.16 boqolkiiba kharashaadka MSF waxaa lagu bixiyey agabka iyo sahayda caafimaadka.Maaddaama tiro badan oo shaqaalaha gargaarka iyo qiyaas badan oo alaabada gargaarka ah la keeney Haiti, ayaa kharashka gaadiidka ku baxay uu noqdey 23 boqolkiiba wadarta kharashka ilaa iyo hadda la bixiyey.
Waxaa jirtey mar wadarta tirada shaqaalaha kooxda MSF ay ahayd in ka badan 3,500 oo isugu jira shaqaalaha xaaladaha degdegga ah ee Haiti u dhashey iyo kuwo caalami ahba – kuwaas oo badidoodu ahaayeen dhakhaatiir iyo kaalkaaliyeyaal, laakiin ay ku jireen kuwo ka shaqeeya adeegga, maamulka, darawaliin iyo isuduweyaal mashaariic. Dhammaadkii Juunyo, ayaa ay MSF weli gudaha uga shaqeynayeen 3,000 oo shaqaale ah oo ka shaqeynayey 19 tas-hiilaadka caafimaadka ah, oo tiro aad uga badan 90 boqolkiiba ay dalka Haiti u dhasheen. Kharashaadka ku baxay shaqaalaha ayaa ahaa 28 boqolkiiba lacagta la kharashgareeyey.
MSF waxa ay si weyn uga mahadcelineysaa malaayiinta dadka ah ee dunida oo dhan ku nool ee gacanta ka geystey maalgelinta hawsheenna ballaaran ee gargaarka Haiti.
* Waa in ilaa heer laga diktoonaadaa wadarta halkaan lagu sheegey sarrifka isbedbedellaya daraaddii.
** Tirooyinka waxaa ku jira oo keliya kharashaadka tooska ah ee la xiriira hawsha; kharashka dhabta ah waa uu ka badan yahay wadarta halkaan lagu xusey.
*** Tirooyinkan la duubey, ee wadartoodu tahay 97 boqolkiiba, ayaa ah qiyaas aad ugu dhow wadarta kharashaadka ilaa iyo hadda la bixiyey.
Tags: dhul-gariir, Haiti, kharash, maaliyad